China Carnosic Acid fekitori uye vagadziri | Geneham
Zita: Carnosic Acid
Tsanangudzo: 5% ~ 90% HPLC
Chitarisiko: Yero Green kana Bhuruu Poda
Simba: Oiri Soluble
Kubudirira: Antioxidant Natural Replacer
Carnosic acid inoonekwa seyechisikigo, inoshanda uye yakagadzikana (yakanyanya tembiricha yakasimba), chengetedzo, isina-chepfu uye isina-mhedzisiro, mafuta-akanyungudika antioxidants uye chinyoro chikafu chinowedzera. Inogona kuwedzerwa mumafuta uye chikafu chine mafuta, chemishonga, chemakemikari, cosmetics uye chikafu, nezvimwewo kuwedzera kunonoka kutanga kweiyo oxidation maitiro emafuta uye chikafu chemafuta, kugadzirisa kugadzikana kwechikafu uye kuwedzera nguva yekuchengetedza, uye kushandiswa se nyama nehove muto, zvakare ine zviitiko zvakanaka zvemuviri uye zvemuzvarirwo, zvakaita sekurwisa mabhakitiriya, inotsigira kudzikamisa hutachiona hweAIDS; Carnosic acid yakakosha pakuchengeta huremu hwemuviri nekugadzirisa kunwa kwemafuta, kuzadzisa chinangwa chekudzikisa uremu, inobatsirawo pakurapa kuzvimba, huro, indigestion & chirwere cheAlzheimer, inogona kuchengetedza hutano hweglucose muropa, uye kukurudzira kuumbwa kwehutano hwekukura kwechinhu, etc. kuderedza dikita, peripheral vascular, chengetedza zvakajairika mashuga eropa, kusimudzira kuchengetedzwa kwenyongo.
Tsanangudzo: 5%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 60%, 90% HPLC
Tsananguro: yakasviba girini kana yero yakasvibirira upfu
Chikamu Chinoshandiswa: Shizha reRosemary
a. Iyo yakasikwa antioxidant, iyo inoshandiswa zvakanyanya mumafuta, chikafu chine mafuta, biomedicine indasitiri, cosmetic indasitiri nezvimwe seyakasikwa yakasvibirira chikafu chinowedzera.
c. Yakasimba uremu-kurasikirwa mhedzisiro. Inogona kukurudzira nekukurumidza metabolism yemafuta neanti-oxidant chiitiko. Kwete chete chengetedza hutano hwakanaka hweropa, asiwo kusimudzira iyo lipid makomputa kuburitsa kubva mumupfudze kuitira kuti uderedze huremu.
Yero kana yero-green poda
Pashure: 1-Deoxynojirimycin (DNJ)
Zvadaro: Rosemary yakakosha mafuta